Samsung ဖုန်းများအား Root လုပ်နည်း Archive
Galaxy S6 Edge ( SM-G925L ) 6.0 Rooting !
Galaxy S6 Edge ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ မိတ်ဆွေများအတွက် အသစ်ထွက်ရှိထားတဲ့ Android Version 6.0.1 ကိုတင်ပြီး မြန်မာစာ Root ဖောက်ဖို့ အခက်အခဲဖြစ်နေသူများ အတွက် TWRP Rooting Method လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ် Requirement SpaceX-Kernel_MM_RC2.1 TWRP 3.0 Supersu 2.71 Zip Odin 3.10.7 လိုအပ်တာလေးတွေသိပြီဆိုရင် လိုအပ်တာလေးတွေဒေါင်းလိုက်ပါအုန်းဗျာ….. ပြီးရင် အထဲမှာပါတဲ့ Odin ကို Run ပါ နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့SpaceX-Kernel_MM_RC2.1_G925L.tar.md5 ကို Odin မှာရွေးပေးပြီး Flash ပေးပါ ပြီးရင် TWRP-3.0_MM_S6-edge_by_ManhIT.tar.md5 ကို Odin မှာထပ်ရွေးပေးပြီး Flash ပေးပါ ပြီးရင်တော့	Read More
Samsung Galaxy S5 SM-G500H ကုို Root လုပ်နည်း
ပထမဆုံး လိုအပ်တဲ့ဖုိုင်များကုို Download ရယူပါ။ ဖုန်းရဲ့ SD Card ဖြစ်ဖြစ် Internal ဖြစ်ဖြစ် Super Su.zip ကုိုထည့်လုိုက်ပါ။ ပြီးသွားရင် ဖုန်းကုိုပါဝါပိတ်လုိုက်ပါ။ Volume Down + Power + Home ကုို ဖိနှိပ်ပြီး Download Mode ၀င်လုိုက်ပါ။ Odin ကုို ဖွင့်လုိုက်ပါ။ Ap နေရာမှာ regeneration(sm-g900h cwm recovery).tar ကုိုထည့်လုိုက်ပါ။ ဖုန်းကုို ကြိုးထိုးပြီး Start ကုိုနှိပ်လုိုက်ပါ။ Pass ပြသွားရင် Recovery ၀င်သွားပါပြီ။ ဖုန်းကုို ပါဝါတစ်ခါပိတ်ပါ။ Volume Up + Power + Home ကုို ဖိနှိပ်ထားပါ။ CWM Recovery Mode ၀င်သွားပါလိမ့်မယ်။ Install Zip	Read More
Samsung Galaxy J7 ကို Root ဖောက်နည်း
Samsung Galaxy J7 ကို Root ဖောက်လိုပါက အောက်ပါဖိုင်များကို Download ရယူပါ။ regeneration(J7Root).zip ကို ဖြည်လိုက်ပါ။ Super Su.zip ကို SD Card ထဲထည့်လိုက်ပါ။ Setting ထဲက Developer Option ထဲက Oem Unlocking ကိုအမှန်ခြစ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ ပြီးရင် Phone ကို ပါဝါပ်ိတ်လိုက်ပါ။ Volume Down + Power + Home ကို ဖိနှိပ်ပြီး Download Mode ၀င်လိုက်ပါ။ regeneration(Odin3_v3.10.7).zip ကို ဖြည်လိုက်ပါ။ Ap မှာ J7(TWRP).tar ကို ထည့်လိုက်ပါ။ ဖုန်းကို Computer နဲ့ချိတ်လိုက်ပါ။ Start ကို	Read More
Galaxy S6 Edge 5.1.1 TWRP Rooting !
ဗားရှင်းအသစ်ဖြစ်တဲ့ Android Version 5.1.1 ကို အမြစ်တူးနည်းလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ် Testing on SM-G925F လိုအပ်တာလေး ဒေါင်းလိုက်ပါအုန်းဗျာ…… အားလုံးဒေါင်းလို့ ပြီးပြီဆိုရင်တော့ Supersu Zip လေးနဲ့ အထဲမှာပါတဲ့ Stock Boot Zip လေးကို ဖုန်း Internal Storage ထဲထည့်ထားပေးပါ ပြီးရင် ပုံမှန်လုပ်နေကျအတိုင်း အထဲမှာပါတဲ့ Odin ကနေ TWRP Tar ဖိုင်ကို Flash ပြီး TWRP ကိုခေါ်ပါ ပြီးလျှင် Supersu Zip Flash ပါ ပြီးရင်နောက်ဆုံးအဆင့် မကျန်ခဲ့ပါစေနဲ့*** အထဲမှာပါတဲ့ Boot.zip လေးပါ Flash ပေးရန် ***	Read More